Hello Nepal News » दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रका विश्वकप छनौट खेल लाइभ कसरी हेर्ने ?
दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रका विश्वकप छनौट खेल लाइभ कसरी हेर्ने ?
सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि साउथ अमेरिकन क्षेत्रमा भोलिदेखि छनौट खेल हुँदैछन् । यी सबै खेल नेपाली समयअनुसार बिहानको समयमा हुनेछन् । अमेरिकी क्षेत्रमा कूल १० टिम छन् । र, यी सबैले एकअर्काविरुद्ध खेल्नेछन् ।
पहिलो चरणमा १० वटै टिमले सुरुआतका २–२ खेल खेल्नेछन् । त्यसपछि बाँकी खेल भने अर्को चरणमा मात्रै हुनेछन् । पहिलो चरणअन्तर्गत पहिलो दिन जम्मा ३ खेल हुनेछन् । जसमा लिओनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिना र लुइस स्वारेजको टिम उरुग्वेले पनि आ–आफ्नो खेल खेल्नेछन् ।
दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रमा हुने विश्वकप छनौट खेलहरू विश्वका कतिपय देशहरूमा लाइभ प्रशाण हुनेछैनन् । भारत र सब–कन्टिनेन्ट क्षेत्रमा पनि यी खेल टिभी च्यानलमा लाइभ प्रशारण हुनेछैनन् । हालसम्म फिफा र कन्मेबलले यी क्षेत्रमा लाइभ प्रशारण अधिकार कसैलाई बेचेका छैनन् ।
तसर्थ, यी क्षेत्रका फुटबल फ्यानले छनौट खेल टिभी–च्यानलमा हेर्न पाउनेछैनन् । त्यसका लागि इन्टरनेट र विभिन्न मोबाइल एप्सहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । गुगल क्रुम ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने Wow Sports Live, Vola Sports र मोबाइलको प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने BD247 नामक एपले यी खेल लाइभ दिनेछन् ।
प्रकाशित मिति २२ आश्विन २०७७, बिहीबार १७:०७
फर्नान्डेजले रचे प्रिमियर लिगको इतिहासमै दुर्लभ कीर्तिमान
मेस्सीले सुपर कपको फाइनल खेल्ने सम्भावना कति ?
रियल मड्रिडमा ‘फ्लप’ जोभिच पुरानै क्लब फर्किए
कोपा इटालियाको क्वार्टरफाइनलमा युभेन्टसको प्रतिस्पर्धी तय
रियल मड्रिड सुपर कपको सेमिफाइनलबाटै आउट : बिल्बाओ फाइनलमा
टिमलाई फाइनल पुर्‍याएपछि कोम्यानले गरे रिकी पुजको शानदार प्रशंसा
फुटबल संघद्वारा बार्सिलोना र मेस्सीमाथि कारबाहीको फैसला
कोपा इटालियाको क्वार्टरफाइनलमा इन्टर मिलान र एसी मिलानको भिडन्त
कोचले ४ जनाको नाम लेखेपछि रिकी पुजले अघि सरेर भने– ‘बोस, पाँचौं पेनाल्टी म हान्छु’
एक सर्तमा हल्यान्ड बार्सिलोना जान सक्छन् !
आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस मनाइँदै
नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग : प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव !
बेवारिसे शव जलाउने नेपाली किशोरी ‘विश्वका १०० प्रभावशाली महिला’को सूचीमा